चर्चित नायिका हेली शाह जसले बन्द सुटकेसमा ४५ मिनेट बिताए – Krazy NepaL
चर्चित नायिका हेली शाह जसले बन्द सुटकेसमा ४५ मिनेट बिताए
November 3, 2020 893
तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेका विषयवस्तुहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ भने टिभी सिरियल `इश्कमें मरजावां २´को सुटकेस सिन जरुर देख्नुभएको होला। उक्त सिनमा नायिका हेली शाह आफ्नो कोठाबाट निस्केर आउँछिन् र चिप्लिएर भित्तामा ठोक्किन पुग्छिन्। अनि बेहोस भएर एउटा सुटकेसमा खस्न पुग्छिन्। त्यसपछि कसैले उनलाई सुटकेससहित उठाएर पानीमा फालिदिन्छ।
यो सिन भाइरल भएपछि यसले धेरै चर्चा पायो। सामाजिक सञ्जालमा यसको मजाक पनि बन्यो। भिडियो भाइरल भएपछि सिनकी नायिका हेली शाहसँग यसबारे कुराकानी गरिएको छ। सुटकेस सिनका बारेमा हेली भन्छिन्,”म आफ्नो कामलाई सकेसम्म राम्रोसँग गर्न चाहन्छु। देखावटी, बनावटी नलागोस् भनेर धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्ने गर्छु। सुटकेस सिनपछि धेरैको प्रतिक्रिया पाएँ। मलाई थाहा छैन कसरी ? तर म पहिलो सुटकेसमा नै फिट भएँ। जुन सेटमा ल्याइएको थियो।
मैले एकदमै गह्रौं लेहेङ्गा लगाएकी थिएँ तैपनि म सुटकेसमा अटाएँ। तर यसको मतलब यो होइन कि, त्यो सबै काम सजिलो थियो। म त्यस सुटकेसमा ४५ मिनेटसम्म खुम्चिएर, बाङ्गिएर बसेँ। त्यहाँबाट निस्किएको धेरै दिनसम्म मेरो गर्दन बेस्सरी दुखिरह्यो।
Prevबंगलादेशले यस्तो धोखा नेपाललाई दियो ओलि सरकारको नाकामी फेरी देखियो
Nextगणेश भगवानको दर्शन गरि कार्तिक १८गते मंगलबार/नोभेम्वर ३ आजको राशिफल भाग्य कस्तो छ हेर्नुस
श्रीमानको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि १८ महिने नानी सहित भारतमा विचल्लीमा शोभा
प्रेमीलाई आफ्नो इसारामा नचाउन माहिर हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति
जति धेरे भोक लागे पनि खाली पेटमा खानै नहुने यी ५ चिज, के खाँदा कस्तो हानी गर्छ ? हेर्नुस्